Haiti: Ny Antoko Fanmi Lavalas Nalàna Tsy Ho Ao Amin’Ireo Fifidianana Manaraka · Global Voices teny Malagasy
Haiti: Ny Antoko Fanmi Lavalas Nalàna Tsy Ho Ao Amin'Ireo Fifidianana Manaraka
Voadika ny 23 Mey 2018 7:08 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Swahili, English
Vao haingana, nihetsika noho ny fanilihan'ny Filankevitra Vonjimaika misahanany Fifidianana an'ireo antoko politika tsy ho ao anatin'ireo fifidianana senatera amin'ny volana Aprily 2009 ny tontolon'ny bilaogy haisiana, Haitian. Ny zoma 6 Janoary 2009, nandefa ny lisitr'ireo kandidà ho amin'ireo fifidianana solombavambahoaka manaraka ao Haiti ny CEP. Asehon'ny blaogera Vario Sérant teo amin'ny Alterpresse ny lisitr'ireo kandidà voahilika :
Kandidà iray hafa voahilika: ny PDG an'ny Cœurs Unis, David Chéry, izay mpifaninana teo ambany elatry ny Fiarahamientana ho an'ny fampandrosoana an'i Haiti (ALAH).
Fahataperan'ny hazakazaka ihany koa ho an'ny mpitarika ny Mandatehezana ho an'ny fanarenam-pirenena (FRN), Guy Philippe.
Tao anaty lisitra navoakan'ny Filankevitra Vonjimaika misahana ny Fifidianana, ny roa ampahatelon'ireo kandidà nisoratra anarana fotsiny no nekena hiatrika ny fifidianana. Vao mainka mbola nampitolagaga ihany koa, ny fanalàna an'ireo kandidà an'ny antoko Fanmi Lavalas rehetra. Mitsikera io fanapahankevitra io ny blaogy Radiokiskeya eto:
Ny alin'ny Alakamisy hifoha Zoma no navoakan'ny Filankevitra Vonjimaika misahana ny Fifidianana (CEP) ny lisitr'ireo kandidà 65, amin'ny kandidà rehetra miisa 105, nekena handray anjara amin'ireo fifidianana ampahany ho senatera ny 19 Aprily 2009.
Tsy nisy voatàna na iray aza ireo kandidà tao anatin'ireo lisitra roa an'ny Fanmi lavalas (antokon'ny filoham-pirenena teo aloha Jean Bertrand Aristide). Rantsana roa mpifanandrina avy ao anatin'ny Lavalas no nametraka ireo lisitra roa ireo.
Nahatonga tombatombana marobe ity fanesorana tanteraka ity, toy izay hita tao amin'ny radiokiskeya :
Ny ankamaroan'ireo kandidà voahilika tamin'ny fifidianana dia tsy maintsy hiatrika an'ireo fiampangana azy ho voarohivohy taminà heloka bevava sy fanondranana antsokosoko zava-mahadomelina, nofaritan'ny Sampana Nasionaly an'ireo Fikambanana Mpiaro Zon'Olombelona (RNDDH), ny Polisy Nasionaly ao Haiti (PNH) ary ny Fitsaràna.
Teo amin'ny blaogy HaitiRectoVerso, Decky Lakyel mitondra ireo fanazavan'i Frantz Verret, filohan'ny CEP, mikasika ny fanilihana an'ireo kandidà rehetra mpikambana avy amin'i Lavalas:
.'Noraisinay tanaty fandinihana ireo antontan-taratasy nalefan'ny kandidà tsirairay avy’, hoy izy nanampy. ‘Tsy nanana taratasy fanamarinana avy amin'ny antokony’ ireo kandidà an'ny Fanmi Lavalas’, hoy ny fanazavàny nandà ny hanao fanehoankevitra mombao olana anatiny an'ny antokon'i Aristide.
Ao amin'ny ampahany farany no afka ahitàna ireo fanazavàna tena miteraka adihevitra be:
‘Ny lalàm-pifidianana sy ny lalàmpanorenana no nampiharinay’, manamafy Andriamatoa Verret, izay milaza fa tsy maintsy miezaka ireo mpandray anjara rehetra mba hanajana ny lalàm-pifidianana voalohany ao Haiti. Ambonin'izany, manipika ny filohan'ny CEP fa ny filoham-panjakana [René Préval], tsy nanao, na kely aza, tsindry tamin'ny fanapahankevitry ny sampana misahana ny fifidianana.
Tsy fifanandrifian-javatra akory ny antony nandavàn'i Verret ny faningotsingorana ny Filoham-pirenena, satria maro no mihevitra fa natao izao rehetra izao hanoherana ny Filoham-pirenena haisiana teo aloha Jean-Bertrand Aristide.
Ny fanilihana an'ireo kandidà 40 (anisan'izany ireo 11 an'ny antoko Lavalas) dia niteraka fanehoankevitra isankarazany – ary tena marobe – araka izay azo vakiana eo amin'ito adihevitra amin'ny tambajotra ito, eo amin'ny Forum Haïti [amin'ny fiteny frantsay sy kiriola]. Araka ny radiokiskeya, voatanisa matetika, naneho ny tsy hafaliany manoloana ny fanilihana miaro fitanilàna natao an'ireo kandidà sansantsasany, i Etazonia sy Kanadà:
Manantitrantitra i Janet Ann Sanderson Ambasadaoron'i USA ao Haiti […] fa any amin'ireo Fanjakana demokratika ‘ireo fifidianana marina sy demokratika dia andraisan'ny rehetra anjara ary tsy manavaka’ ary tsy maintsy manampy amin'ny ‘fampiraisana ny demokrasia’ amin'ny fampandraisana anjara an'ireo antoko politika lehibe rehetra.
Tsy nisy fisalasalana, nentanin'io fanohanana avy any ivelany io, nanapa-kevitra ny Lavalas ny hanao fanohanana (fampakàrana) ny fanapahankevitry ny Komity Vonjimaika Misahana ny Fifidianana, na dia notsindrian'ilay Filankevitra aza fa fanapahankevitra tsy azo iverenana io:
Ny Zona, na izany aza, nampahafantarin'ny mpitondratenin'ilay rafi-pifidianana, Frantz Bernadin, an'ireo mpanao gazety, fa ny CEP no fitsaràm-pifidianana tena mahefa, tsy misy fampakarana ambony azo atao amin'ny fanapahankeviny mikasika ireo kandidà voaray.